ပန်းဂေါ်ဖီသနပ် easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ပန်းဂေါ်ဖီသနပ် easy cook
ပန်းဂေါ်ဖီသနပ် easy cook
Posted by weiwei on Jan 14, 2012 in Food, Drink & Recipes | 28 comments
အခုလိုရာသီမှာ ပန်းဂေါ်ဖီပေါလေ့ရှိပါတယ်။ အပွင့်ကြီးကြီးနဲ့ ဈေးပေါတဲ့အချိန်မှာ ပန်းဂေါ်ဖီသနပ် လုပ်စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ ….
ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီး ထည့်လိုသလောက်
ပန်းဂေါ်ဖီကို အတုံးသေးသေးတုံးပြီး ဆားရေနဲ့အရင်ဆေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ရေစစ်ပြီး ရှလကာရည်နဲ့ နာရီဝက်ခန့်စိမ်ရမယ်။ ရှလကာရည်ကို မြုပ်အောင်မစိမ်နိုင်ရင် ဇွန်းရှည်တစ်ချောင်းနဲ့အပေါ်အောက်နှံ့အောင် ခဏခဏမွှေပေးနေရပါမယ်။ အဲဒီထဲကို ကြက်သွန်ဖြုလှီးထားတာနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းလဲ ထည့်စိမ်ရပါမယ်။ အချဉ်ဓါတ်ဝင်လာရင် ဇကာနဲ့ပြန်စစ်ပြီး နေပူလှမ်းရပါမယ်။ နေပူလှမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ကြီး ရေရှည်ထားနိုင်တဲ့အချိန်ကွာပါတယ်။ ၂ ရက်လောက်နဲ့ အပြတ်စားချင်ရင်တော့ နေပူမလှမ်းလဲရပါတယ်။ ခြောက်နေရင်တော့ ကြာကြာပိုခံတာပေါ့ …
ဇီယာနဲ့ပဲနံသာစေ့ကို ထောင်းရမယ်။ ထောင်းထားတဲ့ဇီယာမှုန့်၊ ပဲနံသာမှုန့်နဲ့ ဆနွင်းမှုန့်ကို ဒီအတိုင်းပဲ ထည့်ရမယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်းမှုန့်ကိုရေနဲ့ဖျော်ပြီး ဆီပူအိုးထဲထည့်ဆီသတ်ရမယ်။ ကျက်ခါနီးမှ အမဲစေ့လေးတွေထည့်ပြီး အဲဒီဆီတွေကို ပန်းဂေါ်ဖီထဲထည့်ပြီး အားလုံးသမအောင် မွှေပြီးရင် စားလို့ရပါပြီ ….
နိင်ဂျံဂါးမှာနေတဲ့ သူများအဖို့ မြန်မာအစားအစာဆိုပြီး ၀ယ်စားကြတယ် အကုန်လုံးနီးပါး ထိုင်း ကုန်ပစ္စည်တွေပဲ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ လက်ဖတ် လောက်ပဲ မြန်မာပြည်က ၀င်တယ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ ပန်းဂေါ်ဖီပွင့် ကြော်စားဖြစ်တယ် ထိုင်းနိင်ငံကလာတာ ဘယ်လိုမှအရသာမရှိဘူး …မြန်မာအစားအစာတွေလဲ နိင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်နိင်ရင်အရမ်းကောင်းမှာပဲ…..
ကိုရီးယားမှာ ပန်းဂေါ်ဖီမရှိဘူးလား ????
ရန်ကုန်မှာ တော်တော်ပေါနေတယ် … အရသာကတော့ အပွင့်ကြီးလေ စားလို့မကောင်းလေပါပဲ ….
ပန်းဂေါ်ဖီက ရှမ်းပြည်က လာတာနဲ့ တိုက်ကြီးက စိုက်တာနဲ့ ကွာတယ်။
ရှမ်းပြည်က လာတာက အရမ်းနူးညံတယ်။
တိုက်ကြီး စိုက်တာကတော့ ကြမ်းတယ်.. နည်းနည်း အခါးဓါတ်မျှမျှလေး ပါနေတယ်။
ကိုရီးယားမှာ ရှိတဲ့ အပွင့်က ကျွန်တော့်တူလေး လက်သီးဆုပ်လောက်တောင်မရှိဘူး.. သူတို့လဲ ကြော်လှော် ချက်ပြုတ်စားတာမတွေ့မိဘူး.. အစိမ်းတိုင်းကိုပဲ ရှာလကာ ရည်လိုဟာမျိုးနဲ့စိမ်စားတယ်.. နောက် ပန်းဂေါ်ဖီ အစိမ်းပွင့် ကိုပဲအစားများတယ်… အခုရာသီကတော့ အသီအရွက်ရှားပါးတဲ့ရာသီပဲ ဂျီးတော်ရေ……….
ဒန်ပေါက် တို့ ထောပတ်ထမင်းတို့ နဲ့ တွဲစားလိုက်ရရဖြင့် တော်တော်မြိန် မယ့် ဂေါ်ဖီသနပ်
ပန်းဂေါ်ဖီ အမြှောက်လဲ အချိန်ရရင် တင်ပေးပါဦး..
သေနတ်ထက် အမြှောက်ဆို ပိုစားကောင်းမယ် ထင်လို့ ဘာ
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ ပရဆေးဆိုင်တွေမှာ ပန်းဂေါ်ဖီသနပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာသူတို့ အနေတော်စပ်ပေးပါတယ် … အဲဒီလိုဝယ်မိလို့ ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာ မသိလိုက်တာ …
ဟုတ်… ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်သုပ်လည်းကောင်းတယ်နော်။ သနပ်တော့ လုပ်မစားဖူးဘူး။ နောက် ကန်စွန်းရွက်အစိမ်းသုပ်လည်း ငရုတ်သီးမှုန်နဲ့ သုပ်စားတာ အတော်ကောင်းတယ်။ မှတ်ထားဦးမယ်။ အိမ်မှာ မေမေ့ကို လုပ်ပေးဖို့ ပြောရမယ် အဟိ…
အဲဒီပန်းဂေါ်ဖီကို မန်းလေးဘက်မှာတော့ ပန်းမုံလာလို့ခေါ်တာဗျာ။
သနပ် ဆိုတာမန်းလေးကတော့ အတော်လုပ်စားတယ်။
ကျနော်အဖွားကတော့ အဲလိုသနပ် တွေကိုဖန်ပုလင်းလေးနဲ့ထည့်ထားတာဗျာ။
အိမ်မူ့ကိစ္စမနိုင်တဲ့ မလုပ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးများကျနော့်အဖွားနဲ့တွေ့ရင် ဗိုက်ကြောပြတ်ပြီသာမှတ်။
လေးပေါက်က ကြော်ငြာဝင်ပြန်ပြီ မယုံဘူး လက်တွေ့စားရမှယုံမှာ အိမ်ထမင်းဖိတ်ကျွေးပါ
မမဝေရေ ဒီမှာတော့ လေးပေါက် ပြောသလို ပန်းမုံလာပဲ ခေါ်ကြတယ်
ဒန်တန့် တန် အမြှောက်တစ်သိန်း
မဝေရေ….သနပ်လုပ်ပြီးရင် ဗုံးပါလုပ်ပေးအုံးနော်..(ခင်လို့ စတာနော်)…
အဲဒီ မဲမဲ အစေ့ ဘာလဲဆိုတာကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားမိတယ်။
အခုခေတ် ဗီနီကာကိုသုံးလာကြတော့ လွယ်လဲလွယ် ကောင်းလဲကောင်း အထားလဲခံလာတယ်။
အရင်ခေတ်ကလဲ ဗီနီကာ ကတော့ရှိပါတယ်။ သုံးလေ့မရှိကြတော့ ဆန်ဆေးရည် ကြည်ကြည်လေးတိမ်၊ အချဉ်ခံပြီး လုပ်ကြရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပန်းဂေါ်ဖီသနပ် အချိုးကျအောင်လုပ်တတ်တဲ့သူဟာ ဇကာကြီးပဲ။ မလုပ်တတ်ရင် သိုးနံ့ နံ သွားတာကိုး။ အဘွားနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မကြာခဏလိုက်ဘူးလို့ သိထားတာလေးပါ။
မမဝေရေ အိမ်မှာလည်း လုပ်စားဖြစ်တယ်
ပန်းဂေါ်ဖီအပြင် မုန်လာဥနီ၊ သခွားသီးပါထည့်တယ်
လုပ်နည်းကတော့အတူတူပါပဲ သခွားသီးထည့်ရင်တော့ အလယ်အူတိုင်ထုတ်ပစ်ရတယ် …
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖွားရှိတုန်းက ဆောင်းရာသီရောက်ရင် ပန်းဂေါ်ဖီသနပ် အများကြီးလုပ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလှူတော့တာပဲ … မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီသနပ်ကို တစ်အိမ်သားလုံးကြိုက်ကြတယ် … အခုကျွန်မလို့လက်ထက်မှာတော့ တစ်ပွင့်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေပြီ ဒါပေမယ့် ရိုးရာတစ်ခုလိုပဲ နှစ်တိုင်းလုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ….
ပန်းဂေါ်ဖီကို သကြားဖြူးပြီး နို့ဆီနဲ့တို့စား၊ အတော်ချို၏။။။
ပန်းဂေါ်ဖီက အပွင့်ကြီးအောင် မစင်ဖျန်းရတယ်ဆို။
မိလ္လာရေဖျန်းရင် အသီးအနှံတွေ ကြီးထွားတာကတော့ အမှန်ပါပဲ .. တရုတ်ပြည်မှာ အဲဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတာကို လက်တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ် …
မြန်မာပြည်မှာတော့ မသိဘူး …
လူကြီးတွေ ပြောတာကြားဖူးတယ်… ရှေးတုန်းက တရုတ်တွေ အီးအီးပါရင်တောင် ကိုယ့်မြေမှာ ကိုယ်ပါတယ်။ သူများမြေမှာ သွားမပါဘူး သဘာဝမြေသြဇာတွေ သူများဆီ ရောက်သွားမှာ စိုးလို့..
မဆူးရော အီးအီးပါရင် သူများအိမ်သွားပါတာလား
သဘာဝမြေသြဇာတွေ သူများဆီ ရောက်မသွားအောင်လေး
ဒါဆိုပရဆေးဆိုင်မှာ သွားဝယ်လိုက်ပါ့မယ်၊ကျေးဇူးပါ ဝေေ၀။
အဲဒီ သနပ်တွေကို စားချင်ပေမဲ့ မဆလာနံတာကြီးကို ဖျောက်ပေးနိုင်ရင်အတော်ကောင်းမယ်ဗျာ..
စားချင်ပေမဲ့ အနံ့ကြောင့်ခပ်ခွာခွာနေ နေရတယ်..